I-8x32 Podcast: USomlomo weSiri kaJuni | Ndisuka mac
8 × 32 I-Podcast: USomlomo noSiri kaJuni
Sele sinesiqendu esitsha se # podcastapple ekhoyo apho simisa khona kwiziphumo zezemali zika-Apple ezibhengezwe izolo, isangqa esikhohlakeleyo sokuba neemveliso ze-Apple, ixabiso leapps kwiVenkile yeApple okanye ukuphuculwa kweSiri kuhlobo olulandelayo lwe-iOS. Sele siqale iveki yokuqala kaMeyi kwaye imihla ebalulekileyo isondela kwinkampani yaseCupertino kunye nabasebenzisi bayo, ukuqeshwa kokuqala kusondele kwaye kukuthi nge-5 kaJuni sine-WWDC eSan José.
Kodwa siza kulishiya ikamva kwaye sigxile kwinto ekhoyo, sishiya ividiyo ye-podcast oya kuthi igcinwe kuyo Ijelo le-Youtube Apho oogxa bethu uNacho noLuis bathetha ngale nto ikhankanywe ngasentla nokunye okuninzi:
Kule veki, okokuqala, siyaxolisa kubaphulaphuli bethu nakumaqabane ethu alwayo uLuis noNacho, ngokuba bebodwa kule ngqungquthela ye- # podcastapple. Inyani yile yokuba benze umsebenzi obalaseleyo. Ngaphandle kwamathandabuzo, kule veki izayo sinethemba lokuba asizukubuyela umva ngomzuzu wokugqibela kwaye sibe liqela liphela elizokwabelana ngeendaba, izimvo kwaye abanye bayahleka kunye nani nonke.
Unokuzikhuphelela isiqendu samva nje sePodcast ngqo umjelo wethu we-iTunes. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo malunga neendaba zamva nje kwaye ufuna ukuba sikunike isandla, kuya kufuneka uye kwi-hashtag #podcastapple kwaye usishiyele izimvo zakho. Amalungu ahlukeneyo eqela aya kuzama ukukunceda kangangoko sinako. Unokusebenzisa i-hashtag kwimidiya yoluntu ukuya thumela iingcebiso zakho ezinxulumene nepodcast, imibuzo okanye nantoni na oyifunayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » 8 × 32 I-Podcast: USomlomo noSiri kaJuni